Akanandaba nabambiza ngesehluleki u-Erasmus - Impempe
Akanandaba nabambiza ngesehluleki u-Erasmus
Akakwazanga ukufika ngisho kuhhafu wesibalo samagoli ayezibekele sona ngesikhathi ejoyina iMamelodi Sundowns uKermit Erasmus. Kodwa uthi lokhu akumenzi aqwashe ebusuku ngoba uyazazi izinto ezimphazamisile.
Ushode ngamagoli angu-27 ukuthi afike esibalweni abezibekele sona njengoba eshaye amagoli amathathu kuphela. Nokho ukuthi ubelithola ijezi yinto enkulu kwazise abanye bafike balizwe ngendaba kuleli qembu elibophele izibabuli zodwa zabadlali.
Yize efike waba nesiqalo esihle kumaBrazilians futhi kubonakala engagcina ewashayile lamagoli, ubuye wanyamalala. Lo mdlali oseke wagijima nakwi-Orlando Pirates uthikanyezwe wukulimala.
“Emidlalweni embalwa yokuqala bengibukeka ngiza kahle,” kusho lo mdlali. “Angiwashayanga amagoli angu-30 futhi uma abantu bethi ngiyisehluleki ngalokho, anginankinga.
“Angisabi ukusho ukuthi ngihlulekile. Kodwa uma ngingaphazanyiswanga ukulimala kuncane engingeke ngikwenze… into ebalulekile kimi manje wukugwena ukulimala.
“Uma sikhuluma iqiniso nje bese sibheka ukuthi ihambe kanjani isizini, sibheke ukuthi ngabe ngiyidlale yonke yini imidlalo… Abantu vele bazongibeka amabala, nami ngiyazisola. Kodwa asikho isidingo sokugxekwa.
“Sekumele sikhohlwe yilokho manje, sigxile ekulungiseleleni isizini ezayo. Kuhlale kunethuba lokuphinde uzame, yilokho okuhle ngebhola,” kusho u-Erasmus.
Previous Previous post: UBaxter uthembisa ukuyiphendula umshini iChiefs
Next Next post: Uzohlala noma uyahamba? Kuzocaca maduze ngoZinnbauer kwiPirates